ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးသည်သန်း ၂၀၉ သန်းကျော်စီး | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးသည် ၂၀၉ သန်းကျော်သွားခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးသည် ၂၀၉ သန်းကျော်သွားခဲ့သည်
08 / 01 / 2020 အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, တူရကီဖြတ်ပြီးလေဆိပ်ယမန်နှစ်န်ဆောင်မှုများပေးကြသည် 209 သန်း 92 တထောင် 548 ခရီးသည်နဲ့တိုက်ရိုက်ကူးအပြောင်းခရီးသည်ကပြောသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်လေယာဉ်၊ လေယာဉ်၊ ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်စာရင်းဇယားများကိုအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှထုတ်ပြန်သည့်ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင် (DHMI) မှဝန်ကြီး Turhan ကပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကပြည်တွင်းလိုင်းများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုလေယာဉ်အရေအတွက် ၆၂,၀၀၀ ၄၄၂ သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Turhan လိုင်းတွင် ၄၃၉၀ ၈၉၀ ရှိကြောင်း၊ အထက်စီးကဆောင်ရွက်သည့်စုစုပေါင်းလေကြောင်းခရီးသည်စုစုပေါင်း ၁၄၄,၀၀၀ ၇၂၄ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပေးထားသောလတွင်, တူရကီ Turhan7သန်း 298 တထောင် 489 ထို့ကြောင့်လများအတွက်တိုက်ရိုက်ကူးအပြောင်းခရီးသည်အားဖြင့်စုစုပေါင်းခရီးသည်အသွားအလာ6သန်း 164 တထောင် 431 ပမာဏ "ခဲ့ကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသည်အသွားအလာဖော်ပြ, 13 သန်း 474 တထောင် 156 ၏လေဆိပ်ပြည်တွင်းခရီးသည်အသွားအလာကိုဖြတ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင် ။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများတွင်ဒီဇင်ဘာလ ၅၆၀၀၀ ၁၃၂ တန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်း ၂၂၁၀၀၀ ၃၆ တန်အထိစုစုပေါင်း ၂၇၇,၀၀၀ ၁၆၈ တန်အပါအ ၀ င်ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်း၊ စာတိုက်နှင့်အိတ်များတင်ဆောင်လာသည့်လေဆိပ်များ” ဟုသူကပြောသည်။
Turhan သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီမှဒီဇင်ဘာလအထိလေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်ပျံသန်းသည့်လေယာဉ်အသွားအလာပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ် ၈၃၉၀၀၀ ၈၅၀၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်း ၇၁၃,၀၀၀ ၆၅၁ ထုတ်လွှင့်မှုအရသိရသည်။
သန်း 100 140 တထောင် 814 ၏ပြည်တွင်းခရီးသည်အသွားအလာအတွက်လေဆိပ်အထွေထွေတူရကီ, နိုင်ငံတကာခရီးသည်အသွားအလာ Turhan 108 သန်း 692 တထောင် 517, ဖွစျကွောငျးဖျော "မနှစ်ကတိုက်ရိုက်ကူးအပြောင်းခရီးသည်အားဖြင့်စုစုပေါင်းခရီးသည်အသွားအလာ 209 သန်း 92 တထောင် 548. မှာမတ်တပ်ရပ်" သူကဆိုသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပြီးခရီးသည် ၅၂ ၅၂ ဒသမ ၃ သန်းကို ၀ န်ဆောင်မှုပေး
Turhan ကဒီဇင်ဘာလအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့ပျံသန်းထွက်ခွာသည့်လေယာဉ်အရေအတွက်သည်ပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များတွင် ၈,၀၀၀ ၂၁၅ ဦး နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များတွင် ၂၆၀၀၀ ၄၂၁ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ စုစုပေါင်း 8 သန်း 215 26 အပါအဝင် 421 သဘောပေါက်ခဲ့သည်
ယခုနှစ်ပထမသုံးလတွင် Turhan ကအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တွင်လေယာဉ် ၂,၀၀၀ ၆၃၀ နှင့်ခရီးသည်အသွားအလာ ၃၂၇,၀၀၀ ၁၆၉ ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ GerçekleştirAprilပြီလမှဒီဇင်ဘာလကုန်အထိခရီးသည် ၃၂၇,၀၀၀ ၇၉၉ စီးနှင့်ခရီးသည် ၅၂ သန်း ၂၅၉,၀၀၀ ၈၂၆ ခရီးသည်ရှိခဲ့သည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားခဲ့သည်
Turhan က ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်Atatürkလေဆိပ်တွင်လေယာဉ်အစီးပေါင်း ၁၃၈,၂၃၉ စီးရှိခဲ့ကြောင်း၊ အထွေထွေလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်Aprilပြီလပထမပတ်အထိAtatürkလေဆိပ်တွင်ခရီးသည် ၁၆ သန်း ၇၂ သိန်း ၅၃၄ ဦး လိုက်ပါလာကြောင်း Turhan ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီလိုလေဆိပ် ၂ ခုမှာစုစုပေါင်းလေယာဉ်အစီးပေါင်း ၄၆၈,၀၀၀ ၃၈ လုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ခရီးသည် ၆၈ သန်း၊
ခရီးသည်များဒ Metrobus နံပါတ်အသုံးပြုခြင်းနောက်ဆုံးတစ်နှစ်တာ4သန်းနေဖြင့်တိုးမြှင့်
တူရကီလေကြောင်းလိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သန်းခရီးသည်များအသုံးပြုမှု 210 ခဲ့သည်
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသုံးပြီးခရီးသည်အရေအတွက်7သန်းချဉ်းကပ်
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT လိုင်းသုံးပြီးခရီးသည်အရေအတွက် 1 သန်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro အတွက်ခရီးသည်များအရေအတွက်စံချိန်တင်တိုးတက်အသုံးပြုခြင်း
ခရီးသည်များဒအရေအတွက် 100 သန်းကျော်လွန်İzbe
YHT 5,5 သန်းနေဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခရီးသည်အရေအတွက်ကိုကျော်လွန်သွားထားပါတယ်
Akçarayအတွက်ခရီးသည်များအရေအတွက်7သန်းရှာမည်
အဆိုပါ Marmaray 295 နှင့်အတူပို့ဆောင်ခရီးသည်များအရေအတွက်သန်းကျော်လွန်
Izmir Streetcar သန်းကျော်လွန် 21 ခရီးသည်များ၏နံပါတ်ရွှေ့
48 သန်းကျော်ကျော် Eurasian ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမော်တော်ယာဉ်ဖြတ်ကူးအရေအတွက်
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 263 စုဆောင်းမှုရလဒ်ကြေငြာ!
Erzincan Trabzon မီးရထားလမ်းကြောင်းပြProbleနာမရှိပါ